Sat, Dec 7, 2019 at 4:09pm
चिसोले गर्दा ओंठ फुट्यो ? यसो गर्नुहोस् ... #आहा खबर# माथिल्लो भोटेकोशी परीक्षण प्रसारण शुरु #आहा खबर# अमेरिका–तालिबान वार्ता पुनः शुरु #आहा खबर# अटो पल्टिँदा पाँचको मृत्यु #आहा खबर# अभिनेत्री ऋचा शर्माले गरिन् बिहे, को हुन् श्रीमान ? #आहा खबर# हवाई क्षेत्रको सुरक्षा र गुणस्तर प्राथमिकतामा #आहा खबर# नेपालसँग हारेपछि माल्दिभ्सका प्रशिक्षकको जागिर 'चट्' ! #आहा खबर# आमा ! यिनले अब कहिल्यै तिम्रो छाक माग्ने छैनन्... #आहा खबर# जाडो छल्न साइबेरियन चरा शुक्लाफाँटामा #आहा खबर# त्रिविका विद्यार्थीले एक लाखसम्म उपचार खर्च पाउने #आहा खबर# योजना ६३ करोडको, कोषमा रकम ५० लाख, बन्ला १०८ फिटको मूर्ति ? #आहा खबर# महिला क्रिकेटमा नेपाललाई काश्य कदक #आहा खबर# सार्क स्थापनाको ३५औँ वर्ष : १९औँ शिखर सम्मेलनको टुंगो कहिले लाग्ला ? यस्तो छ श्रृंखला... #आहा खबर# नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तारका लागि गैँडाकोटका ३ हजार रुख काटिने #आहा खबर# किन मन पराउँछन् कटीहरु हाँसो–ठट्टा गर्ने केटा ? #आहा खबर#
बिहिवार, २६ भाद्र २०७६,	आहाखबर	33.65K
६ महिनापछि नेपालमा दर्ता नगरिएका माेबाइल नचल्ने भएका छन् । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले ६ महिनापछि इन्टरनेशनल मोवाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी कोड 'आइएमइआइ' दर्ता नभएका मोवाइलमा बन्देज लगाउने भएको छ ।
दुरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार अवैध रुपमा भित्रिएका मोबाइललाई नियन्त्रण गर्ने उदेश्यसहित प्राधिकरणले एमडिएमएस 'मोवाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम' लागू गर्न लागिएको छ । प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले यो सिस्टम लागू गर्नका लागि प्राधिकरणले भारतको ओएसआई कन्सल्टेन्सी, मलेसियाको न्युमेरा 'एम' एसडिएन बिएचडी र सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसनलाई ठेक्का दिइसकेको बताए ।
उनले भने, 'हामीले तीनवटा कम्पनीलाई यो प्रणाली लागू गर्नका लागि ठेक्का दिइसकेका छौँ । उनीहरुले काम सुरु गरिसकेका छन्। आउँदो छ महीनामा एमडिएमएस प्रणाली लागू हुनेछ।' प्रवक्ता अर्यालका अनुसार एमडिएमएस सेवा विस्तार गर्नका लागि ७० लाख ६६ हजार अमेरिकी डलर लागत रहेको छ ।
यस अघि प्राधिकरणले आधिकारिक कम्पनीले ल्याउने गरेको मोवाइलमा रहेको आइएमइआइ नम्बरलाई म्यानुअल रजिष्ट्रेशन गर्दै आएको थियो भने निकट भविष्यमा वेववेस मोवाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम 'एमडिएमएस' मा दर्ता गर्नेछ ।
प्राधिकरणले यस अघि भन्सार छलेर अवैध रुपमा आयात हुने विद्युतीय उपकरण ट्र्याकिङ गर्ने इक्विपमेन्ट आइडेन्टी रजिष्ट्रर (इआइआर) प्रणाली लागु गरिसकेको छ। उनले भने, 'हाम्रो मुख्य उद्धेश्य भनेकै मोवाइल प्रयोग व्यवस्थित बनाउनु हो। प्रयोगकर्ताहरुले आधिकारिक विक्रेताबाट मोवाइल खरिद गर्ने वातावरण बनाउनका लागि हामीले यो प्रणाली लागू गरेका हौँ। यो भएपछि फेक आइएमइआइ नम्बरमार्फत हुँदै आएका अपराधिक कृयाकलाप नियन्त्रण हुनुका साथै अवैध सेटहरु भित्रिने कार्य नियन्त्रण हुनेछन्।'
प्राधिकरणले एमडिएमएस लागू गर्नु अघि आधिकारिक मोबाइल विक्रेता कम्पनी, दुरसंचार कम्पनी र नेपाल प्रहरी समेतसँग समन्वय गरिसकेको उनले बताए। उनका अनुसार व्यक्तिले विदेशबाट उपहार स्वरुप ल्याउने मोबाइल सेटलाई सिस्टममा दर्ता गरेपछि सुचारु गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
प्राधिकरणले विगतमा व्यक्तिले विदेशबाट ल्याएका मोबाइल सेट सहज रुपमा दर्ता गर्न छलफल सुरु गरिसकेकाे छ । कसैले भन्सार छली गरेर ल्याएको मोबाइल नेपालमा नचल्ने प्राधिकरणकाे दाबी छ ।
प्रवक्ता अर्यालले भने, 'दर्ता नभएका मोवाइल प्रयोगकर्तालाई कालोसूचीमा राखिने छ । दर्ता हुन आएको अवस्थामा पहेँलो सूचीमा राखिने छ ।'
टिकटक विरुद्ध अमेरिकामा मुद्दा, जानकारीहरु चोरेको आरोप
मोबाइललाई सुरक्षित राख्न चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुस् यस्ता उपाय
नेपाल जीवनमा आधारित क्यान्भास हो : सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा
नेपाल टेलिकमले प्रिपेड सिम निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै
अब ६ महिनादेखि साइन इन नभएका ट्वीटर अकाउन्ट बन्द हुने
सञ्चार मन्त्रालय मातहतका कार्यालयको प्रगति ६४ प्रतिशत
सिसी क्यामरा जडानपछि आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा सहज
इन्टरनेटले निस्क्रिय बन्दै किशोरकिशोरी : ८३% नेपाली 'टिनेजर' अल्छीको सूचीमा
हराएको मोबाइल एक मिनेटमै यसरी पत्ता लगाउनुहोस्
प्रतिपक्षी काँग्रेस आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रियो – सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा
यी हुन् विश्वमै सर्वाधिक बिक्रि हुने मोबाइल फोनहरु
कहिलेबाट सुरु भयो सेल्फी लिने चलन ? जान्नुहोस् रोचक कुरा
पश्चिमी वायुको प्रभावले केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना
आखिर ब्रह्माण्डमा कति तारा होलान् त ?
नेपाल टेलिकमले १८ अर्बको फोरजी परियोजनामा किन गर्‍यो ढिलाई ?
कसरी लिने नेपाल टेलिकमको बल्क एसएमएस सेवा ?
नेपाल टेलिकमको बल्क एसएमएस सेवा सुरु, यस्तो छ सुविधा !
निशान छापमा भएको नेपालको नक्सा नै गलत, सरकार भन्छ- गुगलबाट तान्दा यस्तो भयो
केही मोबाइल एप जुन हामीले फोनमा राख्नै हुँदैन !
युएनडिपीको सहयोगमा नेपालमै पहिलोपटक गोताखोर तालीम सञ्चालन
मानव मस्तिष्कलाई कसरी बदल्न सकिन्छ ? शरीरसँगै बूढो हुँदैन मस्तिष्क !!
विद्युतीय प्रणालीसम्बन्धी मापदण्ड लागू गर्न विभागलाई निर्देशन !
१ सय ८ मेगापिक्सल क्षमताको क्यामराजडित मोबाइल फोन सार्वजनिक